३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता ! – Kavrepati
Home / समाचार / ३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता !
admin2weeks ago	समाचार Leaveacomment 1,383 Views
विराटनगर । संखुवासभाको मादी नगरपालिका– १ खोला गाउँ टोलमा एकै परिवारका ६ जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । बौद्धमान कार्कीको परिवारका ६ जनाको भएको घटनाले अहिले सबैको नजर त्यति तानिएको छ । सोहि घरमा आँखा देख्न र कान सुन्न नसक्ने ९३ वर्षीय बौद्धमान भने सकुशल छन् ।
स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘सबैजनाको शव उस्तै किसिमले घो’प्टो पा’रि’एको अवस्थामा भेटिएको छ, त्यसैले यो घटना पे’से’वर अ’प’रा’धीहरूबाट भएको हुनुपर्छ ।’
Previous खुसिको खबर ! बिनिताको बुवा अस्पतालबाट निस्किए ,यसरी घर आउदै ,बिनिता खुसि (हेर्नुस् भिडियो )
Next शौचालयबाट चम्चाको भरमा खाल्डो खन्दै सुरुङ बनाई ६ कैदी कारागारबाट फरार